Brackley | Indlu Eqhayiweyo | Ilali emangalisayo
Indlu ekumhlaba osikelwe izindlu yonke sinombuki zindwendwe onguMarselle
I-Brackley yindawo ebanzi kakhulu kwaye eqaqambileyo ye-3 yokulala evalelwe yindlu yelitye kwilali entle yaseLangham. Iikhilomitha nje ezi-2 ukusuka elunxwemeni kwaye ujikelezwe ziihambo ezinkulu kunye nee-pubs. Sinegadi enkulu elungele izinja nabantwana. Le ndlu ineempawu zoqobo kwaye yindlu ethandekayo netofotofo ukuhlala ngelixa uphonononga iNorth Norfolk.
Ezantsi unegumbi lokuhlala eliphangaleleyo neliqaqambileyo, elinesitshisi somthi kunye neefestile macala onke.
Igumbi lokutyela elahlukileyo linamacango okutyibilika akhokelela egadini.
Ikhitshi ixhotyiswe kakuhle kakhulu ngezinto ezisemgangathweni kwaye inefestile entle eneembono zegadi. Ibandakanya umatshini wokuhlamba izitya, umxube wezandla, imicrowave, iitoti zekeyiki njalo njalo.
Kukho indawo yokuhlamba eyahlukileyo enomatshini wokuhlamba kunye nesomisi.
Igadi intle kwaye ijikeleza indlu yonke, oko kuthetha ukuba ungalonwabela ilanga imini yonke kwaye abantwana banokubaleka bekhuselekile.
Phezulu kukho amagumbi okulala amathathu, ngalinye linombono omangalisayo webala!
Igumbi lokulala lenkomo (igumbi elikhulu lokulala) linebhedi enkulu kunye neewadi ezifakelweyo.
Igumbi lokulala elunxwemeni linebhedi ephindwe kabini kunye newadi enkulu.
Igumbi lokulala ledaisy linebhedi enkulu kunye neyunithi yeshelufu.
ILangham yindlu entle enezindlu ezinamatye anqabileyo kunye nezindlu zangasese, iikhilomitha nje ezimbini ukusuka elwandle kunye neelali ezingabamelwane iBlakeney kunye neCley-elandelayo-uLwandle ezantsi kwendlela. ECley uya kufumana iigalari, amagumbi eti, iCley Windmill, kwaye kukho i-delicatessen entle ekwathengisa iziqhamo kunye nemifuno. IBlakeney, ilali enkulu kwaba babini, ineevenkile, iigalari, iindawo zentselo kunye neBlakeney Hotel, ivenkile encinci kunye nesikhululo sepetroli.
Sivumela ubuninzi bezinja ezimbini eziziphethe kakuhle. Ezantsi kuphela ndicela.
4.97 · Izimvo eziyi-75
Le yinxalenye emangalisayo yehlabathi. ILangham izele zizindlu ezenziwe ngeflinti yaseNorfolk. Yinto entle! Yilali ezolileyo kakhulu kwaye sinendawo yokusela yasekhaya ethandekayo kumhambo nje wemizuzu embalwa ukusuka kwipropathi. Kukho imithwalo yokwenza apha, abantwana kunye nabantu abadala.
Umbuki zindwendwe ngu- Marselle
We live in North Norfolk and love this part of the world!
Ndihlala eNorth Norfolk ndonwabile ukunceda ukuba kuyimfuneko.
Idiphozithi Yokhuseleko - ukuba wenza umonakalo kwikhaya, usenokubhataliswa ukuya kutsho kwi-$133
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Langham